koswan: ပိုလာဝက်ဝံရဲ့  ပုံပြင်
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံရဲ့  ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကြားဘူးပါသလား... ?
အေးခဲတဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာ ဘုရင်တစ်ဆူလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အက်စကီးမိုး လူမျိုးတွေက ဘာမှ အင်အားထုတ်စရာမလိုဘဲ အဲဒီဝက်ဝံတွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်။
ဘယ်လိုဖမ်းသလဲဆိုတော့ အက်စကီးမိုးတွေက ဖျံတစ်ကောင်ကို အရင်သတ်လိုက်ပြီး ဖျံရဲ့ သွေးကို ပုန်းတစ်ခုထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ ဓါးမြှောင်ကို သွေးထဲမှာ စိုက်ထားလိုက်တယ်။အရမ်းအေးတဲ့အတွက် ဖျံသွေးဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ခဲသွားပါတယ်။ အဲဒီခဲသွားတဲ့ ဓါးမြှောင်ပါတဲ့ ဖျံသွေးကို ပုံးထဲကထုတ်ပြီး ရေခဲပြင် ပစ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
ပိုလာဝက်ဝံတွေက သွေးအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီအကြိုက်ကပဲ သူတို့ကို သေမင်းလက်ထဲ ရောက်စေခဲ့တယ်။ အနံ့ ခံကောင်းတဲ့သူတို့ဟာ သွေးညှီနံ့ကို အဝေးကြီးကတောင် ရနိုင်ပါတယ်။ အက်စကီးမိုးတို့ ပစ်ထားတဲ့ သွေးခဲကို ခြေရာခံပြီး တွေ့တာနဲ့ လျှာနဲ့အငမ်းမရ စတင်လျက်ပါတော့တယ်။ လျက်ရင်း လျက်ရင်း လျှာခဲသွားလည်း အစာကောင်းကို လက်မလွတ်ချင်တာနဲ့ ဆက်လျက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခဲနေတဲ့သွေးက ပိုချိုလာတယ်။ ပိုလတ်ဆတ်လာတယ်။ ပိုပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကို သတိမထားမိတော့တဲ့အထိပါပဲ။
လျက်လေ အရသာရှိလေ ၊ အရသာရှိလေ လျက်လေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သွေးကို သူတို့ သောက်နေမိမှန်းတောင်မသိကြတော့ပါဘူး။ အကြောင်းက သွေးခဲအလယ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ဓားက လျက်နေတဲ့ သူတို့လျှာကို လှီးဖြတ်နေခဲ့လို့ပဲ။ အအေးဓာတ်ကြောင့် ထုံနေတဲ့ လျှာက နာကျင်တာကို မခံစားမိတော့ဘူး။ အနံ့ခံကောင်းနှာခေါင်းက လတ်ဆတ်တဲ့သွေးနံ့ရလေ လျက်နှုန်းကမြန်လေလေ နောက်တော့ ကိုယ်သွေးကို ကိုယ်ပြန်သောက်နေမိတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သွေးထွက်လွန်ပြီး မူးလဲသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အက်စကီးမိုးတွေက သူတုိ့ကို ဘာအင်အားမှ မသုံးပဲ ဖမ်းလိုက်ယုံပါပဲ။
ဘဝရဲ့  ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ လွဲမှားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့  ဟာလည်း ပိုလာဝက်ဝံနဲ့တူသွားနိူင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေက အလုပ်ချိန်များများလုပ်လေ ပိုအောင်မြင်လေလေ ဝင်ငွေများများရလေလေလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အဲဒီငွေကြေးကို ဖြုန်းဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ကြဘူး။ တစ်ချို့ က အဲဒီငွေကြေးကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်မှန်းမသိကြဘူး။
ဝင်ငွေများလာတာနဲ့နည်းတူ တစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ချို့ အရာတွေကို သူတို့ဆုံးရှုံးကြရတယ်။ လူ့ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာဖြစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့ အချိန်တွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ မိဘမေတ္တာငတ်နေတဲ့ သားသမီးတွေ ၊ လူမှုရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီဖို့အရေးဆိုတာတောင် သူတို့မေ့နေခဲ့ကြတယ်။
အမေရိကားရဲ့  အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တစ်ခုက အငြိမ်းစားယူကုန်ကြတဲ့ ထိပ်သီးစီးပွားရေး ပညာရှင် ဆယ်ဦးကို မေးခွန်းမေးပြီး စာရင်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ မေးခွန်းက " တကယ်လို့ ဘဝကို အသစ်ကပြန်စရရင် သင်အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ လက်မလွှတ်ချင်ဆုံး အရာက ဘဲာလဲ " တဲ့။ ပညာရှင် ခုနှစ်ဦးက တူညီတဲ့ အဖြေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဖြေက " တကယ်လို့ ဘဝကို အသစ်က ပြန်စရရင် သားသမီးတွေနဲ့ အတူနေတဲ့ အချိန်ကို လက်မလွှတ်ချင်ဆုံးပါ " လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။
တစ်ချို့ လူတွေက ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် နောင်တမရဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ မဆုံးဖြတ်ခင် သေချာမစဉ်းစားခဲ့ရင် နောက်ဆုံးတော့ နောင်တရတတ်ကြစမြဲပဲ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ ငွေဟာ ရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့ အရာပါတဲ့...ရှာလေလေ ရလေလေ လိုချင်လေလေ နောက်ဆုံးတော့ လုံလောက်ပြီလို့ မထင်ပဲ ငွေနောက်ကိုပဲ ကောက်ကောက် ပါအောင် လိုက်ကုန်ကြတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုလာဝက်ဝံလို ကိုယ်သွေး ကိုယ်သောက်ပြီး ပျော်နေကြတဲ့လူ ဖြစ်နေခဲ့ပြီလား...?????
တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့လူက ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူး ။ မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့လူက အမြဲဆင်းရဲနေတယ်။
သင်ရော ဘယ်လိုလူ ဖြစ်နေပြီလဲ? ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး ။